Hindiya waxay u dhaqaaqi kartaa inay u kala soocdo Bitcoin qayb hantiyeed - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Hindiya waxay u dhaqaaqi kartaa inay u kala soocdo Bitcoin qayb hantiyeed
Tag: Fasalka hantida Bitcoin, Fasalka hantida Bitcoin, El Salvador cryptocurrencies, Lacagta loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee Hindiya
Hindiya, oo markii hore muujisay cadaawad badan oo loo qabo lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', ayaa hadda u xilsaartay guddi la filayo inay dhowaan u soo gudbiyaan golaha wasiirrada hindise qabyo ah.
Kadib talaabadii taariikhiga ahayd ee El Salvador ee ahayd in Bitcoin loo isticmaalo sidii lacag fiat ah (taas oo ka dhigaysa lacag dhameystiran - tusaale waalan!), Xitaa Hindiya dhiirrigeliyayaasha cryptocurrency waxay neefsan karaan neefta gargaarka.
Ilaha muhiimka ah ee la socda warshadaha ayaa la hadlay daabacaha Indian Express in dowladdu ka guurtay mowqifkeedii hore ee cadaawadeed ee ku aaddan lacagaha dalwadda iyo wax badan waxay u badan tahay inay u kala saari doonto Seeraar qayb hantiyeed dhawaan ee Hindiya.
Jaangooyaha suuqa Dammaanadaha iyo Guddiga Is-dhaafsiga ee Hindiya (SEBI) kormeeri doona qawaaniinta warshadaha loo yaqaan 'cryptocurrency' ka dib markii Bitcoin loo qoondeeyo inay tahay heer hantiyeed. Warshadaha Hindida ee loo yaqaan 'cryptocurrency cryptocurrency' ayaa sidoo kale wadahadal la leh Wasaaradda Maaliyadda oo ku saabsan sameynta xeerar cusub, ilaha warshadaha ayaa tilmaamaya in koox khubaro ah oo wasaaradda ka tirsan ay daraaseynayaan arrinta. Sharci qabyo ah oo loo yaqaan 'cryptocurrency' ayaa loo badinayaa in la horgeyn doono Baarlamaanka.
Horumarka ayaa imanaya maalmo kadib markii Bangiga Dhexe ee Hindiya (RBI) wareegto uu bangiyada ugu diray Jooji inaad ka fogaato macaamil ganacsi oo ku lug leh astaamo farsamo iyada oo tixraaceysa wareegtadeedii hore ee ka bilaabatay 2018, maadaama ay amartay maxkamadda sare. Gudoomiyaha RBI Shakthikanta Das, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku celiyey shakigiisa.
"Xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa guddiga cusub ee ka shaqeynaya lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' wuxuu aad ugu rajo weyn yahay qawaaniinta iyo sharciga qaanuunka '… Hindise cusub oo qabyo ah ayaa goor dhow ka dhex muuqan doona golaha wasiirada, kaasoo baari doona xaalada guud isla markaana qaadi doona talaabada ugu fiican. Waxaan aad ugu kalsoonahay in dowladdu ay aqbali doonto cryptocurrencies iyo teknoolojiyada xannibaadda". Erayada Ketan Surana, madaxa dhaqaalaha iyo agaasimaha, Coinsbit, iyo xubin, Internet iyo Mobile Association of India.
Warqad cad oo uu qoray Indiatech waxay soo jeedineysaa in korsashada Hindiya ee Bitcoin oo ah dabaqad kale oo hanti ah ay tahay mustaqbal aad u macquul ah. Sababta oo ah dabeecadda kacsan lacagaha dijitaalka ah (qiimahoodu si ballaadhan ayuu isbeddel ku yimaaddaa maalin kasta) - dukumintigan ayaa qoraya - way adag tahay in loo isticmaalo sidii qalab lacag bixin ah. Dukumiintiga ayaa sidoo kale kugula taliyay in la canshuuro maalgashiyada loo yaqaan 'cryptocurrency,' iyaga oo looga dhigayo kuwo ku xiran canshuurta faa'iidada raasamaalka ee waafaqsan Sharciga Canshuuraha Dakhliga.
Hitesh Malviya, khabiir ku ah blockchain iyo maalgashiga loo yaqaan 'crypto investment', wuxuu yiri: "Fikradayda, dowladda Hindiya waxay baari doontaa hab lagu sharciyeeyo Bitcoin. Uma maleynayo in Hindiya ay tixgelin doonto aqbalida Bitcoin inay tahay lacag fiat ah mustaqbalka dhow, maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelan doontaa booska Indian rupee aad u badan. U aqbalida Bitcoin inay tahay lacag isku xidhan waxay fikrad fiican u tahay quruumahaas aan haysan lacagtooda ama ku tiirsan dollarka Maraykanka ”.